» सर्वसाधारणले प्याज खान छाडे !
सर्वसाधारणले प्याज खान छाडे !
१४ पुष २०७६, सोमबार ०६:५२
अहिले बजारमा प्याजको मूल्य आकासिएको छ । अप्रत्यासितरूपमा प्याजको मूल्य बढेसँगै सर्वसाधारण उपभोक्ताले अहिले प्याज खान छाडेका छन् । भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै दशैँको समयपछि नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको हो । भारतबाट सहजै निर्यात हुने प्याजको निर्यातमा अहिले प्रतिबन्ध छ ।
नेपाली बजारमा खपत हुने प्याज अधिकांश भारतबाट आउने गरेको छ । नेपालमा प्याजको अभाव र भारतबाट आउने प्याजमा प्रतिबन्ध लागेपछि अहिले नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य सधैँको भन्दा बढी छ । अहिले नेपालगञ्जको रानीतलाउ तरकारी बजारमा प्याजको भाउ खुद्रा प्रतिकिलो दुई सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
तीन महिनाअघि प्रतिकिलो ४० देखि ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको प्याज तीन महिनाको अवधिमा किलोमा एक सय ५० रुपैयाँ बढेको छ । तरकारी बजारभन्दा बाहिरका खुद्रा पसलमा प्रतिकिलो दुई सय ५० रुपैयाँसम्म कारोबार भइरहेको उपभोक्ता बताउँछन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका १० का शुद्धप्रसाद चौधरीले प्याजको मूल्य अप्रत्यासित रुपले बढेपछि अहिले प्याज नै खान छाडेको बताउनुभयो । केही दिनअघि आधा किलो प्याजको एक सय ७० रुपैयाँ तिरेको बताउँदै प्याजको मूल्य बढेको देखेर अचम्मित भएको चौधरीले बताउनुभयो । पछिल्लो समय अरू तरकारीको मूल्यमा भने धेरै घटबढ भएको छैन ।
तर प्याजमा भने एक महिनाको अवधिमा प्रतिकेजी दुई सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ । भारतले प्याज निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धको सोझो असर नेपाली बजारमा परेको नेपालगञ्जको रानीतलाउ तरकारी बजारका व्यापारी अरिसली राईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ुअहिले मात्रै होइन २र३ महिनाअघिदेखि नै प्याजको मूल्य बढ्दै आएको हो ।ु
नेपाली बजारमा अहिलेको प्याजको मूल्य चार वर्षयताको सबैभन्दा महँगो मूल्य हो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका ११ का मकसुद राई प्याजको मूल्य मासुभन्दा महँगो भएको बताउनुहुन्छ । ुमासु प्रतिकेजी ८ सय रुपैयाँ छ तर प्याज एक नम्बर ९पाँच किलो० को ९ सय रुपैयाँ पुग्यो, अब त खानै छाड्नुपर्ला जस्तो छु, उहाँले भन्नुभयो ।
प्याजको मूल्यमा वृद्धिसँगै अहिले केही पसलमा प्याज नै पाउन छाडेको छ । भान्सामा दाल, तरकारी, अचार, मासलगायत सबै चिजमा मसलाको रुपमा प्रयोग हुने प्याजको मूल्य बढेपछि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परेका छन् । यस क्षेत्रको ठूलो हिस्सा माग धान्दै आएको भारतीय प्याज नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएपछि प्याजको अभाव देखिएको हो । एजेन्सी